बद्री पंगेनी राजन भट्टराईको प्रचारमा आयो राजन दाइ आयो, जनता ठग्ने फटाहा छेउ लाग्यो – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
बद्री पंगेनी राजन भट्टराईको प्रचारमा आयो राजन दाइ आयो, जनता ठग्ने फटाहा छेउ लाग्यो
२०७४, २३ कार्तिक बिहीबार १३:४५ November 9, 2017 Nijgadh.com Comments
आयो आयो राजन दाइ आयो, जनता ठग्ने फटाहा छेउ लाग्यो
विकास गर्न आश्वासन बाँड्ने जति नि पाइन्छ, ४ न. क्षेत्रको विकास गर्न राजन नै चाहिन्छ’
‘गगन थापाको भाषणको पछि नलाग्नुहोस् । के के भाषण गर्नुहोला । तपाईं आफ्नो प्रचारमा लाग्नुहोस्’ गायक पंगेनीले भने– ‘तपाईलाई मेरो शुभकामना छ । तपार्इंले निर्वाचन जितेर क्षेत्र र देशको बिकास गर्नुपर्छ ।’
चितवनमा बिक्रम पाण्डेलाइ अर्को ठुलो झड्का : राप्रपाका २ सय कार्यकर्ता माअ‍ोवादी केन्द्रमा प्रवेश
नेकपा एमालेक्षेत्र नं. ६ को बिभिन्न ठाँउमा घर दैलो सम्पन्न
२०७०, २६ कार्तिक मंगलवार ०३:०८ November 12, 2013 Nijgadh.com
२०७४, १२ बैशाख मंगलवार १६:३७ April 25, 2017 Nijgadh.com